अब पनि नसच्चिए बर्बाद हुन्छ :: नारायणकाजी श्रेष्ठ (नेता, एनेकपा माओवादी) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १५:२७ English
अब पनि नसच्चिए बर्बाद हुन्छ :: नारायणकाजी श्रेष्ठ (नेता, एनेकपा माओवादी)
० तपाई: झन्डै ६ महिनासम्म खासगरी मिडियासँग एउटा दूरी बनाएर बस्नुभयो, कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएन, किन होला ?
– नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो जो अत्यन्त सुन्दर हुनुका साथै विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक साधन–स्रोतका हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको देश हो । यस्ता सम्भावना बोकेकामध्ये विश्वमै औँलामा गन्न सकिने एउटा देशका रूपमा नेपाललाई लिन सकिन्छ । तर, यस्तो सम्भावना बोकेर पनि हाम्रो देश अत्यन्त अविकसित र कमजोर अवस्थामा रह्यो । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यस्तो किन भइरहेछ त भनी आत्मचिन्तन गर्नकै लागि यस अवधिमा मैले आफूलाई केन्द्रित गरेको थिएँ ।
० यो ६ महिनाको आत्मचिन्तनबाट तपाई:ले के–के समस्या पत्ता लगाउनुभयो त ?
– नेपालको अहिलेको दूरावस्थाको निम्ति राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार छ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो । राजनीतिक नेतृत्वभित्र मूलभूत समस्या ६ वटा रहेको मैले पाएँ । पहिलो, हामीमा बाह्य शक्तिमुखी प्रवृत्ति हाबी भयो । नेपाली जनताले सार्वभौमसत्ता प्राप्तिका लागि यति ठूलो लडाइँ लडे, तर जनताको सार्वभौमिकताका लागि दैनिक अभ्यास गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेता या जनप्रतिनिधिहरूमा चाहिँ जे गर्न पनि बाहिरकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति देखियो । जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्न उनीहरूले सकेनन् । दोस्रो, राष्ट्रको समग्र निर्माण प्रक्रिया, समृद्धि या विकासका निम्ति आवश्यक दूरदृष्टि, भिजन अर्थात् सोच पर्याप्त मात्रा या स्पष्ट रूपमा देखिएन नेतृत्वमा । तेस्रो, चरम सत्तालोलुपताको भावले पनि दलहरू या नेतृत्वलाई सर्लक्कै निलिदियो । देश र जनताका लागि नभई आफ्नो निम्ति कुर्सी चाहिने, सत्ता–शक्ति नै आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्ने या अलिक व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा पार्टीका लागि कुर्सी चाहिने र पार्टीको निम्ति दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइयो । चौथो, भ्रष्टाचार असाध्यै बढेर गयो । भ्रष्टाचारले सामाजिक रूप नै लियो र यसमा राजनीतिक क्षेत्रको बाहुल्य बढ्ता रह्यो । पाँचौँ, सिद्धान्त, आदर्श र मूल्य–मान्यता एकदम स्खलन भएर गयो । द्वैधचरित्र नेताहरूमा बेस्सरी हाबी भयो । उपल्ला तहका नेतामै बोली र व्यवहारमा भिन्नता देखियो । कुरा आदर्शका तर व्यवहार उल्टो गर्नु त सामान्य जस्तै हुन पुग्यो । र छैटौँ, सबै क्षेत्रमा अत्यधिक पार्टीकरण भएर गयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारीतन्त्र आदि सबैमा राजनीतीकरण भयो । यी कारणहरूले देशलाई एकप्रकारले जर्जर नै बनायो ।
० समस्या त पत्ता लगाउनुभएछ, समाधान गर्ने उपाय पनि केही पाउनुभयो कि ?
– नेपालको बारेमा नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरू आफैँले समस्या समाधान गर्छौ: भनी सङ्कल्प गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । बाहिरी शक्तिले हस्तक्षेप गरे भनी भन्नुभन्दा पनि त्यो हस्तक्षेप हामी अस्वीकार गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा अहम् हुन आउँछ । आफ्ना मामलामा हामी अरूलाई निम्तो दिन्छौँ कि दिँदैनौँ भन्ने मुख्य कुरा हो । यसर्थ दोषी त मूलभूत रूपमा हामी नै हौँ ।
० यति कुरा गरिरहँदा तपाई:को आफ्नो पार्टी र आफूचाहिँ सच्चिनुपर्ने केही पाउनुहुन्छ कि हुन्न ?
– मेरो पार्टी र म स्वयम्मा पनि सच्चिनुपर्ने कुरा छ, छैन भन्न म सक्दिनँ । हाम्रो पार्टीचाहिँ यसबाट अछुतो रहेको भए त म सोझै काङ्ग्रेस–एमालेहरूमा समस्या देखियो, उनीहरूले यो–यो गल्ती गरे भनेर इङ्गित गरिहाल्थेँ नि ! हाम्रो देशको समकालीन नेतृत्वकै कुरा गरिरहेको छु म । यसमा सबै प्रमुख दलका नेतृत्वहरू पर्दछन् । कसैमा कम कसैमा बढी होला तर सबैको भागीदारी छ यसमा । जहाँसम्म मेरो सवाल छ, मैले त पटक्कै पदलोलुपता देखाएको छैन, ममा त्यो प्रवृत्ति नै छैन भन्ने मेरो व्यवहारबाट जो–कसैले बुझ्न सक्छन् ।
० तपाई:को पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डमा चाहिँ सत्ता–लोलुपताको भाव कति पाउनुभएको छ नि तपाई:ले ?
– प्रचण्डजीमाथि विरोधीहरूले सत्तालोलुप भन्ने आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्, तर मचाहिँ यो मान्न तयार छैन । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा कसैले हटाउन नसक्ने पोजिसनमा रहेर पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको ओहोदा छोडिदिनुभएकै हो । कुनै पनि पदलोलुप व्यक्तिले सजिलै सत्ता छोड्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले प्रचण्डमा सत्तालोलुप व्यक्ति भन्ने आरोप सत्य सावित हुँदैन ।
० तपाई:ले मुलुक चरम पार्टीकरणको सिकार भएको कुरा गर्नुभयो, यसरी पार्टीकरण गर्न–गराउनमा त तपाई:को दल नै एक नम्बरमा छ भन्ने आरोप छ, मान्नुहुन्छ ?
– यो कुरा सही होइन । तर, हरेक नेपाली अब स्वतन्त्र मान्छे नरहेको जस्तोचाहिँ अनुभूति हुन थालेको छ । नेपालीले स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता गुमाइसकेको जस्तो भएको छ । हरेक नेपाली राजनीतिक वकिल जस्ता भए । कर्मचारी पनि त्यही, बुद्धिजीवी भन्ने पनि त्यही, नागरिक समाज त्यही । सबै–सबै नै पार्टी–पार्टीमा विभाजित भएर आ–आफ्नो पार्टीकै मात्र वकालत गर्न थाले, स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्नै छोडे । यो खतर्नाक कुरा हो । हाम्रो पार्टी पनि यसबाट अछुतो छैन, तर राजनीतीकरणमा हाम्रो पार्टी नै सबभन्दा अगाडि छ भन्नेचाहिँ सत्य होइन ।
० राजनीतीकरणबाट मुक्त हुन के गर्नुपर्ला त ?
– यसका लागि नेपालका सबै उच्च राजनीतिक नेतृत्वको टिमले यो देशको यस्तो हालत हुनमा हाम्रो के–कति भूमिका छ, को–कति जिम्मेवार छ भनी गम्भीर रूपले आत्मनिरीक्षण र आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ । बिग्रेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि सकारात्मक गुणात्मक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ नेपालमा । राजनीतिक नेतृत्वले अब यथास्थितिबाट आफूलाई फेर्न नसक्ने हो भने नेताले आफूलाई फेर्न नसके देशको मुहार पनि फेर्न सकिन्न र देशले नयाँ दिशा पाउन सक्दैन भनी आत्मबोध गर्न नसके यो देश नवउपनिवेशिक वृद्धाश्रम बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ । विकासको स्थिति यही नै हुने हो भने गाउँका गाउँ खाली हुन्छन् । सहरका मध्यमवर्गीय युवा पनि अवसरको खोजीमा युरोप–अमेरिकातिर भासिँदै छन् र देशले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न केही गर्नै सकिरहेको छैन भने अब मुलुकको हालत के होला ?
० तपाई: यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाई:को पार्टी समयमा बजेट ल्याउन खोज्ने सरकारको बाटो छेक्न संसद् अवरुद्ध गराएर सस्तो राजनीतिक स्टन्ट गर्न रुचाउँछ ?
– बजेटलाई समयमै ल्याउनुपर्छ भन्नेमा म जहिल्यै पनि सकारात्मक छु । अझ म त के भन्न चाहन्छु भने हरेक वर्ष बजेट ल्याउने एउटा निश्चित तिथि तय गरिनुपर्छ । कुनै पनि वैधानिक सरकारले तोकिएको दिन बजेट ल्याउनुपर्ने, त्यसमा कसैले कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाउने भन्ने सहमतिबाट नियम नै बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० नेपालमा भए–गरेका सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाई:लाई ?
– राजनीतिक नेतृत्वहरूले ‘सम्झौता गर्छु र मौका पर्दा फेरि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्छु’ भन्ने सोच राखेर काम गर्छन् भने, या अब पनि हामीले नचेत्ने हो भने नेपाली जनताका लागि यो सैह्य हुन सक्दैन । अब पनि नसच्चिए बर्बाद हुन्छ । तसर्थ, सहमतिहरूको क्रियान्वयन अब सकारात्मक रूपले नै हुनेछन् भन्ने ठानौँ ।
० नेकपा–माओवादीसँग तपाई:को पार्टीको एकताको कुरा निकै चल्न थालेको छ, यो सम्भव छ ?
– एकता हुनै सक्दैन भन्न त मिल्दै मिल्दैन, तर अहिले नै एकता भइहाल्छ भन्ने अवस्थाको निर्माण पनि भएको छैन । एकताका लागि सचेत र सकारात्मक प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ हामी ।
० पार्टीभित्र बाबुराम भट्टराईको समूहलाई त मिलाउन सक्नुभएको छैन तपाई:हरूले, बेग्लै पार्टी खोलेकालाई त झन् के मिलाउनुहोला त ?
– हामी जो–जहाँ भए पनि सबै एकै हौँ, सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरू नै हौँ । विचारको रूपान्तरणका निम्ति चलेको सङ्घर्ष मात्रै हो, यसको व्यवस्थापन समय आएपछि सही किसिमले हुने नै छ । पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्दै नयाँ ढङ्गको कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।
० बाबुराम भट्टराईले पार्टी फुटाउने तयारी गर्दै छन् भन्ने चर्चा व्यापक छ नि ?
– अब पार्टी फुट्ने त कुरै छैन । बाबुराम भट्टराईजीले किन बनाउनुहुन्छ अब अर्को पार्टी ? हामी त त्यसरी सोच्नै सक्दैनौँ है ।
० अन्त्यमा, एकताकेन्द्रबाट एमाओवादीमा मिल्न आएर गल्ती गरिएछ भन्ने कहिलेकाहीँ लाग्दैन तपाई:लाई ?
– यस्तो त लाग्दैन । नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका लागि समस्त क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति भएकाले यसमा मलाई कुनै पछुतो र ग्लानि छैन । तर, सकारात्मक कुरासँगै नकारात्मकता पनि हामीमा छ, यसलाई चाहिँ सच्याउँदै रूपान्तरणको बाटोमा लाग्नुपर्नेछ ।
४ असार २०७१, बुधबार २३:२७ मा प्रकाशित